Posted by PhyoPhyo at Saturday, June 30, 2012 Labels: ရှိခြင်းမရှိခြင်း ဆုံမှတ်ထဲကအိမ်လေး, ရောင်စဉ်တွေထဲက အိမ်ခန်းလေးများ
အနက်ရောင်ဟာ အရောင်တွေအားလုံးကင်းမဲ့မှု၊ အဖြူရောင်က အရောင်တွေအားလုံး တည်ရှိမှု၊ မီးခိုးရောင်ကတော့ ရှိခြင်းမရှိခြင်းတို့ရဲ့ အလယ်က ပြည့်စုံတဲ့ မြေကြီးပဲပေါ့။ အနက်ရောင်ဟာ အမြဲတမ်းမရျှိခြင်းတွေနဲ့ တင်းမာခက်ထန်နေတာတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရောင်စဉ်တွေလင်းလက်နိုင်တယ်၊ စတိုင်ကျကျ လှပအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။ အဖြူရောင်ဟာ အမြဲတမ်းသွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ရှင်းသန့်မနေနိုင်ပါဘူး။ နောက်ကျိညစ်ထေးသွားနိုင်တယ်။ မီးခိုးရောင်ကရော.. အမြဲထိုင်းမှိုင်းမနေနိုင်ပါဘူး။ ထူးထူးခြားခြား ရွှင်မြူးတဲ့အရောင်လေးဖြစ်နိုင်သေးသတဲ့။ အရောင်တွေနဲ့ ကစားနိုင်စွမ်းတဲ့ဖန်တီးမှုလေးပဲ လိုအပ်တာပါ။ အနက်၊ အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်တွေဟာ တစ်ခြားရောင်စဉ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြည့်ရင် အထူးခြားဆုံးအိမ်ခန်းလေးကိုရနိုင်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ဟာ သြဇာညောင်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေပြည့်စုံစေတဲ့အရောင်ပါ။ အင်အားပြည့်စေပြီး လွတ်လပ်မှုကိုပြသနိုင်တယ်။ အဖြူရောင်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျစိတ်တွေ၊ နာကျင်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောထားတွေကို ပြေပျောက်စေသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အထီးကျန်မှုကို ပိုပြီးအရှိန်မြင့်စေတယ်။ လှုပ်ရှားသွက်လက်မှုမရှိသလို၊ အင်အားမရှိသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်းရပ်စ်ရဲ့ “ပျော်ရွှင်မှု”နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့အိမ်လေး
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 29, 2012 Labels: နာမည်ကျော်တွေရဲ့ အိမ်
လော့စ်အင်ဂျယ်လိစ်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား နဲ့ ဆန်ဖရန်စ္စကိုဝန်းရံထားတဲ့ Studio City မှာ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် အမေရိကန်ပေါပ့်အဆိုတော်မလေးမိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ၂၀ရာစုအလယ်ပိုင်းကာလဒီဇိုင်းနဲ့ အိမ်လေးရှိနေတယ်။ ၁၉၅၂ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၃.၉ သန်းတန်ကြေးရှိပါသတဲ့။ တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားပြီး အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်လှတယ်။ ဆိုင်းရပ်စ်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘ၀ကိုစတင်ခဲ့တဲ့ Walt Disney စတူဒီယိုနဲ့လည်း နီးနီးလေးပါပဲ။ ဒစ်စ္စနေရဲ့ ဟန်နာမွန်တားနားတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ မိုင်လီစတီးဝပ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်း ဆယ်ကျော်သက်လေးနဲ့ပဲ ဆိုင်းရပ်စ် စတင်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကလည်း အဲဒီအနီးနား တိုလူကာကန်နားက ဆိုင်းရပ်စ်မိဘတွေနဲ့ သိပ်မကွာဝေးတဲ့နေရာမှာ အိမ်တစ်လုံးဝယ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအိမ်က ၄၀၀၀ စတုရန်းပေကျယ်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Saturday, June 23, 2012 Labels: မေမေ့ရဲ့စာ, နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
Hunting The Wall by John Dyson , from RD Nov 2009
( စာရေးဆရာ ဂျွန် ဒိုင်ဆန် ဟာ ဘာလင်ကို ပြန်လာပြီး
၂၈နှစ်ကြာ နိုင်ငံကို ၂ ပိုင်းခွဲခြား ပြစ်ခဲ့ တဲ့ 
ကြောက်စရာ့ ကွန်ကရစ် သတ္တ၀ါကြီးအကြောင်း
ရှာဖွေလေ့လာ တင်ဆက်ထားပုံ က.. ဒီလိုပါ ။)
ကျွန်တော် ဒုတ်ကနဲ ရင်ခုန်သွားတယ် ဗျ။ နယ်ခြားစောင့်လက်ထဲ ကျွန်တော့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ပေးလိုက်ရလို့ လေ။ လက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေ ခြံရံနေတဲ့အစိမ်းရောင်ယူနီဖေါင်းဝတ် အရာရှိတွေက ခက်ထန်ကြမ်းကြုတ်ပုံ ပါပဲ ကင်မရာအလင်းတံခါးရှပ်တာများက ဂျောက်ဂျက်မြည်သံ ထွက်လာမလား။
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 22, 2012 Labels: zombie, သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
Zombie သီချင်းဟာ အိုင်းရစ်ရောခ့်အဖွဲ့The Cranberries ရဲ့ protest song(ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်သီကြွေး)တဲ့သီချင်းပါ။ အိုင်းရစ်ရောခ့်အဖွဲ့ The Cranberries ရဲ့ ၁၉၉၄ က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အယ်လ်ဘမ် No Need to Argue ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ The Cranberries ရဲ့ ဖန်တီးနေကျသီချင်းတွေနဲ့ တစ်မူကွဲပြီး ဂစ်တာ riff ပြင်းပြင်းနဲ့ တီးထားတဲ့ သီချင်းပါ။ grunge/alternative metal သံစဉ်မျိုးဘက်ကို ပိုပြီး နွယ်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, June 14, 2012 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို, အဝေးမှုန် အနီးမှုန်တို့ရဲ့ မျက်ဝန်းအစုံ
ခြံထဲမှာ မြက်ခင်းတွေက တိတိရိရိလေးတွေ၊ ရိတ်ထားခါစမို့ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းရနံ့လေးတွေက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့၊ အဲဒီလို အချိန် မြက်လေးတွေ ခြေထောက်နဲ့ မထိခလုတ် ထိခလုတ်တို့ထိရင်း လမ်းလျှောက်ရရင် သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့။ မာကို့ခွေးလေးက စိမ်းမြမြမြက်သားအပြတ်အစလေးတွေထဲ ကိုယ်ကို လူးလှိမ့်နေတယ်။ သိပ်ဆော့တာပဲ။ ဆော့ရုံတင်ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ သွားနဲ့ ကိုက်ဖြတ်ပြီး တဂျစ်ဂျစ်မြည်အောင် ကိုက်ဝါးသေးတာ။ ကိုယ်တော့ အခု သူနဲ့ မဆော့နိုင်ပါဘူး။ မာကိုရဲ့ ဘောင်းဘီတွေလေ၊ သားရေပြားကြိုးတွေလျော့နေတာ လဲပေးရမှာတွေ၊ မနည်းဘူး။ မာကို တဂျီဂျီလုပ်နေတာ ကြာပြီပေါ့။
“ကိုယ့်ဘောင်းဘီကြိုးတွေ မနှင်းဖြူလေး အားတဲ့အခါ လဲပေးပါဦးကွယ်။ ကိုယ်က အနီးဆို မမြင်ရလွန်းလို့ပါ။ အပ်ပေါက်ထိုးလည်း မမြင်ရဘူးကွာ၊ မျက်မှန်နဲ့ ကြာကြာအာရုံစိုက်ရပြန်တော့လည်း ခေါင်းကိုက်လာတာပဲ။ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ လဲတပ်ပြီးသားပဲ”
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 06, 2012 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
American Idol အဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ၁၁ ရာသီမြောက်ပြိုင်ပွဲတွေကို ဇန်န၀ါရီ၁၈ရက်ကနေ စတင်ပြီး ယဉ်ပြိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၁ကနေ စတီဗင်တိုင်လာနှင့်အတူတူ အကဲဖြတ်ဒိုင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို စိုးမိုးခြယ်လှယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အသက် ၄၂ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂျေလိုဟာ ၆၀ခုနှစ်တွေက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ပုတီးစေ့တွေသီထားတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံကို ဆင်မြန်းထားတယ်။ အဲဒီဝတ်စုံက ဂျေလိုရဲ့ လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ခြေထောက်တွေကို ထင်ရှားစေပါတယ်။ ဒီရာသီအစ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေမှုမှာလည်း hit စင်ဂဲလ် Dance Again သီချင်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းအမျိုးသားတွေနဲ့ ၀န်းရံပြီး သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တယ်။ ပရိသတ်တွေနှစ်ခြိုက်သဘောတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ မေလ၁၁ရက်နေ့က ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ခမ်းနားလှပတဲ့ဝတ်စုံလေးဝတ်ဆင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ အမွှာလေး မက်စ် နဲ့ အမ်မီကိုလည်း ပွဲထုတ်လာခဲ့တယ်။ American Idol ညတွေကို ဂျေလိုက လွှမ်းမိုးထားပါပြီလို့ ဆိုကြတယ်။ ဂျေလိုရဲ့ ၀တ်စုံကြောင့်လား၊ ဂျေလိုရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကြောင့်လား၊ ဂျေလိုရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ကလေးလေးတွေကြောင့်လားတဲ့။ ပရိတ်သတ်တွေက မေးနေကြပါပြီ။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 05, 2012 Labels: ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့
ရှေးမြန်မာလူကြီးတွေဟာ ဆိုကြ တီးကြ မှုတ်ကြတဲ့ အနုပညာသမားတွေကို သဘင်သည် ဖက်ခွက်စားရယ်လို့ ဂုဏ်သရေရှိ လူတန်းစားအသွင် တန်းတူရည်တူ မဆက်ဆံကြပါဘူး။ ကျွန်မတို့ မေမေရဲ့ မိဘများဖြစ်တဲ့ ဦးရွှေဝ နှင့် ဒေါ်ရွှေမတို့ဟာလည်း ကျွန်မမေမေ “ရွှေမှီကလေး”ကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် သီဆိုခွင့် မပေးခဲ့ပါဘူး။ တခါ ကျွန်မမေမေဟာလည်း ကျွန်မကို ကျောင်းကပွဲ တွေမှာတောင် ပါဝင်ခွင့် မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ မေမေက သီချင်းဆိုကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ (မေရှင့် အသံမျိုးကလေးပါ) မေမေပုံပြောရင် စိတ်ပါလက်ပါပြောတတ်ပြီး သူ့နေရာနှင့်သူ လိုက်ဖက်တဲ့ တေးသီချင်းလေးတွေ ဆိုဆိုပြတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ ဘိုးဘိုးအောင် အကြောင်းပြောရင် ….
“တို့ဗမာ တေဇာဂုဏ်ရည် ..ကျုပ်တို့ လူမျိုး တန်ခိုးရှိသည် ..ဘုန်းကံရှင်များ ထင်ရှားခဲ့သည် ပထမံ အတတ်နဲ့ထွက်ရပ်လမ်း ပေါက်ခဲ့ပါသည် ..ဘိုးဘိုးအောင် အထ္ထုပတ္တိကို တကယ် သိချင်ပါလိမ့်…မည်”…
Posted by PhyoPhyo at Monday, June 04, 2012 Labels: ထူးထူးခြားခြားအဆောက်အဦးတွေနဲ့အတူ, အထွေထွေ
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ လစ်စ်ဘွန်းမြို့က စပိန်ဗိသုကာပညာရှင် Santiago Calatrava ရဲ့
ဗိသုကာပညာရပ်ဆိုတာဟာ အဆာက်အဦးဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်နဲ့တည်ဆောက်မှုမှာ အနုပညာနဲ့ သိပ္ပံပညာရောယှက်ဖန်တီးတဲ့ ပညာရပ်ပါပဲ။ ဗိသုကာပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘီစီ ၁ရာစုမှာ ရောမစာရေးဆရာ၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ အင်ဂျင်နီယာကြီး ဗီထရူးဗီးယပ်စ်က De architectura(On architecture) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို အစောဆုံးရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ရောမခေတ်ဗိသုကာပညာအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ On architecture စာအုပ်မှာ ၁၀အုပ်ပါဝင်တယ်။ စာအုပ် ၁. မြို့ရွာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၊ ဗိသုကာပညာရပ်နဲ့ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အထွေထွေ၊ ဗိသုကာတစ်ဦး သို့မဟုတ် ပိုပြီး ခေတ်မှီတဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းများ။ စာအုပ် ၂. အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ။ စာအုပ် ၃. ဘုရားကျောင်းများနှင့် ဗိသုကာစတိုင်၊ စာအုပ် ၄. စာအုပ် ၃ ၏ အဆက်၊ စာအုပ် ၅. မြို့ပြအဆောက်အဦးများ၊ စာအုပ် ၆. ကျေးလက်အဆောက်အဦးများ၊ စာအုပ် ၇. တမံတလင်းကြမ်းခြင်းနှင့် ပလာစတာအုပ်အချောကိုင်အလှဆင်ခြင်း၊ စာအုပ် ၈. ရေပေးဝေရေးစနစ်နှင့်ရေသွယ်တံတားများ၊ စာအုပ် ၉. သိပ္ပံပညာလွှမ်းမိုးသည့်ဗိသုကာပညာ(ဂျီသြမေတြီပညာ၊ တိုင်းတာခြင်း၊ နက္ခတ္တဗေဒ၊ နေနာရီ) နှင့် စာအုပ် ၁၀. ရောမစစ်သား၊ ရေဒဟတ်၊ ရောမနည်းပညာ စသဖြင့် အပိုင်းလိုက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဗီထရူးဗီးယပ်စ်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုဟာ အခြေခံအချက်သုံးချက်မှာ စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် ပြည့်စုံရမယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ကြာရှည်ခိုင်ခံ့မှု - အခိုင်အမာဆောက်ထားပြီး အချိန်ကာလရှည်ကြာတဲ့အထိ ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေ ရှိနေရမယ်။ အသုံးဝင်မှု - ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်အသုံးပြုနိုင်ရမယ်။ လှပတင့်တယ်မှု - လူတွေကို စိတ်နှလုံးကြည်နူးစေပြီး ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စေရမယ်။ အဲဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံမှသာ အဆောက်အဦးကောင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, June 03, 2012 Labels: အဲလစ်ဇဘက်ရဲ့ ရွှေနန်းတက်ပွဲ, မေမေ့ရဲ့စာ
ရွှေနန်းတက်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ လို့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ မေးစရာဖြစ်နေသလို မိန်ခလေးတယောက်ရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ် ရွှေသရဖူ တင်ဖို့အရေး ဒီမျှ အကုန်ခံရသလား လို့ ဝေဖန်သူက ဝေဖန်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါက တကယ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ခြောက်ဆယ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ “ဆဌမမြောက်ဂျော့ဘုရင် မင်းမြတ်” နတ်ရွာစံပြီးချိန်မှာ သမီးတော်ကြီး “အဲလစ်ဇဘက်(သ်)အဲလက်ဇန်းဒါး မေရီဝင်ဆာ” က ထီးနန်းဆက်ခံရတယ်။ နန်းသိမ်းပွဲ အတွက် အကြီးကျယ်ဆုံးတော်ဝင် မင်းခန်းမင်းနားဖြစ်ဖို့လိုအပ်သလို အနုစိပ် မွန်းမံ ပြင်ဆင်ဖို့ ၆လတိုင်တိုင် အချိန်ယူခဲ့ ရပြီးတော့ ဒေါ်လာ၃၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀အကုန်အကျခံခဲ့တယ် တဲ့။ ၀က်စမင်စတာအဘေး ဘုရားကျောင်းမှာ ခန်းနားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြီး။ ၁၉၅၃ခုနှစ် ဇွန်လ၂ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီ ၃၀မိနစ် က နန်းသိမ်းပွဲ ခံခဲ့တာပါ။ အခမ်းအနားကို ၂နာရီ ၃၀မိနစ် ကြာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, June 03, 2012 Labels: အနီရောင်အိမ်လေးထဲက နေ့သစ်တိုင်းမှာ, ရောင်စဉ်တွေထဲက အိမ်ခန်းလေးများ
ရဲရဲနီ တောက်ပတဲ့အသွေးရှိတဲ့ “အနီ” ဟာ ရောင်စဉ်တွေအားလုံးလိုလိုနဲ့ ရောယှက်အလှဆင်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနီရောင်နဲ့ အလှဆင်တဲ့အခါ လွန်ကဲမသွားစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်တဲ့။ အနီရောင်ဟာ စွဲလမ်းတပ်မက်မှု၊ ပြင်းပြတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ကျူးတဲ့အရောင်လို့ ဆိုကြတယ်။ တောက်ပပြီး လှပတဲ့ အနီသွေးရဲရဲအရောင်ကို အိမ်ခန်းတစ်ဝိုက် အလှဆင်ရမှာ လူတော်တော်များများကတော့ စိုးရွံ့တတ်ကြပါတယ်။ အနီရောင်လို အသွေးရင့်တဲ့အရောင်မျိုးဟာ နဂိုထဲက အမှောင်ကျနေတတ်တဲ့ အိမ်အတွင်းပိုင်းတွေ နေရာတွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ထိတ်လန့်စရာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ အနီရောင်ရဲ့ မူလပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရသပြင်းပြင်းကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တွေ့သလို နေရာအနှံ့အပြား ခြယ်မှုန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လေးဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ကင်းကွာသလိုဖြစ်သွားနိုင်တာကို သတိပြုရပါမယ်။ “အနီရောင်ဟာ ကြည်နူးရွှင်ပြမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကနေ ဒေါသနဲ့ ရန်လိုမှုတွေဆီ နေရာတိုင်းကို လှည့်လည်သွားလာနိုင်တယ်” လို့ ချီကာဂို Civility Design က ဒီဇိုင်းဆရာ ဒွန်ရာနေးက ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနီရောင်ကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရှိရပါမယ်တဲ့။
အသွေးရင့်အနီရောင်ကို ထူးခြားတဲ့အဆင်အပြင်ရလာအောင် အလှဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။
ပထမဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ အလွန်အကျွံအသုံးမပြုဖို့ပါပဲ။ အလွန်အကျွံအသုံးပြုလိုက်ရင် မျက်စိစပါးမွှေးစူးစရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အနီရဲရဲရဲ့ တောက်ပမှုက တခြားအသွေးအရောင်တွေကို ဖိနှိပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ လှည့်စားချက်လေးတွေနဲ့ အနီရောင်ကို အသုံးပြုပါတဲ့။
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 01, 2012 Labels: ကန်းထရီးတွေရဲ့ အိမ်, နာမည်ကျော်တွေရဲ့ အိမ်
၄၇ကြိမ်မြောက်နှစ်စဉ် ကန်းထရီးဂီတအကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကို ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က လာစ့်ဗေးဂက်စ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်စာအတွက် အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေသူဆုကို တေလာဆွစ်ဖ်ရရှိခဲ့တယ်။ ဘလိခ်ရှဲလ်တန်က အမျိုးသားအဆိုရှင်ဆု၊ မီရန်ဒန်လမ်ဘာ့ထ်က အမျိုးသမီးအဆိုရှင်ဆု၊ လေဒီအန်တီဘဲလ်လမ်က အဖွဲ့လိုက်ဆု၊ မျက်နှာသစ်အဆိုတော်ဆုကို အသက် ၁၉နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ အမေရိကန်အိုင်ဒဲလ်ဆုရ စကော့တီမက်ခရီးရီက ရရှိခဲ့ကြတယ်။ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာတော့ ကန်းထရီးစတားတွေဟာ သူတို့ ၀တ်ဆင်နေကြ ဘုထ်၊ ဂျင်း တွေနဲ့ ချည်သားရှပ်အင်္ကျီတွေကို မ၀တ်ဆင်ကြတော့ပါဘူး။ ရှုးတွေ ကုတ်တွေ ပွဲနေ့ပွဲထိုင်ဂါဝန်တွေ ၀တ်ဆင်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ကန်းထရီးသီချင်းတွေဟာ ချိုမြသလို ကန်းထရီးစတိုင်လ် ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံဟာ အင်မတန်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းလှတယ်။ ကန်းထရီးစတားတွေရဲ့ ဦးထုပ်ကြီးတွေချိတ်ထားမယ့်နေရာ၊ ရေခဲစိမ်တီးချိုချိုတစ်ခွက်ကို အနားယူပမ်းဖြေရင်းသောက်သုံးနိုင်မယ့်နေရာဖြစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်လေးတွေကို ကြည့်ရအောင်နော်။
၂၀ရာစုရဲ့ကန်းထရီးဂီတကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့ အမေရိကန် ကန်းထရီးဂုရုကြီး ဂျွန်နီကက်ရှ်(Johnny Cash)ရဲ့ တန်နက်ဆီပြည်နယ် ဟန်ဒါဆန်ဗီးလ်က အိမ်လေးပါ။